माग्नेले काखमा लिएको बच्चा किन सधैं निदाइरहेको हुन्छ ? – Dainik Samchar
August 13, 2021 396
ती माग्नेले नसुने झै गरिन् र घोसे मुन्टो लगाएर आफ्नो टाउको अाफूले लगाएको ज्याकेटले छोपिन्। मैले फेरि आफ्नो प्रश्न दोहोर्याएँ। उनले टाउको उठाइन् र दिक्क लागेको भावसहित मेरो पछाडि कतै टाढा हेरिरहिन्। भागी हाल यहाँबाट” अस्पष्ट फुस्फुसाहट निस्क्यो मुखबाट।
उदार र करुणाका खानी भएका भद्रभलाद्मीहरु हो!माग्नेले सडकमा सुताइरहेका बच्चालाई करुणामय भएर हेर्नुको साटो त्यसका पछाडि लुकेको भयानक तस्विरलाई सम्झनुहोस् । auxx.me बाट साभार याे लेख नेपाल रिडर्सका लागि दामोदर उपाध्यायले भावानुवाद गर्नुभएकाे हाे ।
Prevचर्चामा युएसबी कण्डम : के हो यो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
Nextकतारबाट ७ महीनाको पे’ ट बो के र फर्किएकी युबतीले आफुलाई यस्तो अबस्थामा अलपत्र पारेर छोडेर जाने युवकलाई भेटाईंन (भिडियो सहित)